Flam Ukuba Myrdal, Norowe: A Summer Stop Beautiful | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Flam Ukuba Myrdal, Norowe: A Summer Stop Beautiful
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 04/02/2020)
I Flam kaloliwe ukusuka Flam ukuya yena kuthiwa omnye kakhulu elihle uhambo ngololiwe kwihlabathi yaye siyaqonda isizathu. Uhambo uthatha iyure kuphela kodwa ezinobuhle ngokwenene umoya-ukuthatha. Ungaphoswa le amava xa ukuhambela Norway. Xa uhambo iyure, uloliwe kuthatha abakhweli evela Sognefjord e Flam leyo kwinqanaba lolwandle, ukuya yena kwisitishi entabeni apho kwi 867 iimitha ngaphezu komgangatho wolwandle. Le yenye imigca emibi kaloliwe standard-gauge kwihlabathi. Lo kaloliwe wathatha 20 iminyaka ukuba ugcwalise. Imigudu linegunya babalekayo kwaye entabeni bonisa ngaphandle unesibindi kakhulu nobunjineli abanezakhono ukuba imbali kaloliwe Norwegian wakha wambona. Flam ukuba yena, Norowe: A Ehlotyeni Stop Omhle ngokwenene uhambo ebomini.
Ekhwele i Flam Railway
Ukuthatha uloliwe ukusuka Flam ukuya yena uya kuthatha nawe 20 imigudu, 18 leyo ezazakhiwe ngesandla, kwaye uyeke kwiilali eziliqela njengoko uqukuqela indlela yayo i Valley Flam. Lo loliwe unika abakhweli siqonde kodwa zama ufumane isihlalo ecaleni i window ukuba izimvo best yaye ezi kungavula ku Summer ekukhuliseni amava owodwa. station yena liphezulu entabeni kwaye ibandakanya nto kodwa kwigumbi lokulinda, kwedesika itikiti, kunye a cafe amancinci. Unakho ukukhwela phezulu kwaye wehla entabeni uloliwe.
Flam ku yena e Summer
Summer lixesha egqibeleleyo ukuthatha uloliwe ukusuka Flam ukuba yena. Imozulu sifudumele kwaye yonke into iluhlaza! Cinga weenduli ngokwekristale amanzi abalekayo zizityalo amahle neentyatyambo ibiselityatyambile ngokupheleleyo. Kukwakho bentaba kokubini ukuya nokubuya Flam and yena. Oku kuthetha ukuba banokuyifumana uloliwe ukuya yena uze becela umva phantsi onwabele kwelanga.
Ukuba kukho enye into ekufuneka uyenzile xa usiya Norway, uloliwe kaloliwe ukusuka Flam ukuya yena na. It is a stop Summer elihle. Uloliwe uqhuba zonke ngeenxa zonke Unyaka ukuya ku 10 Utyeshelo ngosuku e Summer. amatikiti Thenga yakini Norway na isikhululo sikaloliwe swi okanye ngokutsalela umnxeba iziko NSB. Bona sithethanje azifumaneki online. Qiniseka ukuba amatikiti yakho le loliwe ngokukhawuleza ufika eNorway ukunqanda ukudana kunye amava ebomini!
Sisebenzisa umnikelo amatikiti etreyini European, nje uye kwiwebhusayithi yethu Gcina A kuqeqesha onwabele ukhwele.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/flam-to-myrdal-norway/- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#flam #yena #ihlobo travelnorway
Gems Hidden EYurophu nendlela Fumana Kukhona ngetreyini
Ukuqeqesha ngezimali, Uhambo loLoliwe, Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba